Booqashada madaxweyne Farmaajo ku tagayo Eritariya maxaa ugu jira Somaliya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Booqashada madaxweyne Farmaajo ku tagayo Eritariya maxaa ugu jira Somaliya
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu maanta ka dego caasimada Eritariya ee Asmara. Waxa casuumad u fidiyay Madaxweynaha Eritariya ee Afwerki.
Hadaba waxa dadku isweydiinayaan waxa Somaliya ugu jirta booqashadan xilli uu fiicnaadey xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritariya oo colaadoodu ku salaysneyd mid u dhaxaysa Tigreegii Sanaawi dadkiisa iyo Afwerki oo deegaan ahaan Itoobiya wada dega isku luqadna ah inkastoo ay kala qabiil yihiin.
Booqashadii raiisal wasaaraha Itoobiya ku furfurey Eritariya xiriirkana ku soo celiyay inkastoo ay Imaaraadka iyo Sucuudigu sheegteen inay iyagu qayb weyn ku lahaayeen, waxay ahayd mid dan ugu jirta Itoobiya iyo Eritariya labadaba qaasatan si weyn ugu ah Eritariya oo iyadu haysata badda Itoobiya u baahan tahay.
Waxayna dibedda u soo saartey Eritariya oo go’doon siyaasadeed uu geliyay Sanaawi. Booqashada madaxweyne Farmaajo ku tagayo Eritariya waxay fursad kale u tahay Eritartiya oo aduunka u sheegaysa in ay dhamaatey colaadii iyo siyaasadii geeska oo markii horeba ay aabaha u ahayd Itoobiya iyo nidaamkii Sanaawi.
Wuxuuna madaxweynaha Eritariya tusayaa caalamka in Eritariya u furan tahay caalamka ayna jiri doonin in lagu eedeeyo in ay taageeran argagixisada Shabaab ee xasuuqey muslimiin badan oo Somali ah.
Waana halka ay ka duuleyso weyna dhici kartaa in casuumadaan ay lug ku leeyihiin Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Inkastoo Eritariya ay fadhiyeen siyaasiyiin Somali ah oo diidanaa soo gelitaankii Itoobiya Somaliya sanadii 2006, hadana ma jirin colaad toosa oo u dhaxaysay Somalida iyo Eritariya aan ka ahayn colaada iyaga iyo Jabuuti u dhaxaysa.
Dawlada Somaliya guud ahaan ma jirto wax faaiido ah oo booqashadan Farmaajo ku tagayo Eritariya ka soo galaysa aan ka ahayn Itoobiyaa kula heshiisay anaguna aan kula heshiino.
Dhinaca dhaqaalaha ma jirto ganacsi toosa oo dhexmara Eritariya iyo Somaliya inkastoo Imaaraadku u istcmaalayo Eritariya inuu ku fushado danihiisa Wahaabiyeed ee uu ka wado Yaman, kuna cunaqabateeyo ganacsiga dadka iyo dawlada Jabuuti.
Somaliya ayaa isku filan haddii ay hesho dawlad xoogan oo meesha laga saaro maamul jufeedyadan dulinka ku ah dhaqaalaha dalka iyo dadka iyo ciribtirida argagixisada gaalaysa Muslimiinta.